ဒီအချိန်မှာ မီတာမဆောင်ရရင် မနေနိုင်သူတဦး ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အကြွေးတောင်းတာ အကျင့်ပါနေတဲ့ အီးပီစီ အကြောင်း - ပညာ ပါဝါ
အစောကြီး လာပေးသွားတယ် ဘာကြီးတုန်းလို့ မေးတော့ မီတာစာရွက်လာပေးတာတဲ့လေ၊ အမ တနေ့ကမှ လာဆောင်သွားတာဆိုတော့ ဒါဆိုလည်း သိမ်းထားလိုက်ဆိုဘဲ၊ အံ့ရော ဉာဏ်ကြီးရှင်တွေ.. နောက်တလကျ စာရွက် ၂ ရွက် လာပေးပြန်ရော.. မအားတာနဲ့ ၁ ရက်လေးလွန်တာကျ ဒဏ်ငွေ ၃၀၀၀ တဲ့လေ မပြောပါဘူး လှူလိုက်တယ်ဘဲ
သဘောထားလိုက်တယ်. ခုကျ လာပေးပြန်တဲ့ ၂ ရွက်ကို သေချာကြည့်လိုက်တော့ ကြွေးကျန်လေး ဆိုတာလေးတွေ့ပြီး ဒေါသက ထွက်လာရော.. တခါလည်း နှစ်ခါလည်းမဟုတ် စာမတတ်တာလား လူအင်အားမလောက်တာလား ထောင့်မစေ့တာလား ချက်ချင်းဘဲ ရုံးသွားပြီး..
ဒါက ဘာကြွေးကျန်လည်းလို့မေးတော့ အမတို့ အရင်လက မဆောင်တာဆိုဘဲ.. ဒီမှာကြည့်ဆိုပီး ချလံပြတော့. ရပါတယ် ဖျက်ပေးပါ့မယ်တဲ့.. သူတို့ကျ လွယ်လိုက်တာ ကိုတွေ နောက်ကျ ဒဏ်ကြေးတဲ့ သြချလောက်ပါတယ် အီးပီစီ ရယ်.. ဝန်ထမ်းမလောက်ဘူးလို့ ပြောရအောင်လည်း
နေ့လည်ကျသွားကြည့်ကြည့် ငုတ်တုတ် ဝိုင်ဖိုင် လေးနဲ့ လက်ထဲ ဖုန်းကိုယ်စီနဲ့ အလုပ်တွေကိုဖြစ်လို့ ဘယ်တော့များမှ တိကျမှန်ကန် နည်းစနစ် မှန်မှန် ဖြစ်ပါ့မလဲ မျှော်မိနေဆဲ..
ဒီအခ်ိန္မွာ မီတာမေဆာင္ရရင္ မေနႏိုင္သူတဦး ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အေႂကြးေတာင္းတာ အက်င့္ပါေနတဲ့ အီးပီစီ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္- အီးပီစီ ကို ေတာ္ေတာ္ တင္းလာၿပီ အိမ္ကို မီတာစာ႐ြက္ လာမေပးလို႔ အဲ့နားေရာက္တုန္းေလး ၃ လစာ တာဝန္သိသိ မီတာေဆာင္လာတယ္၊ ကဲ ေနာက္ ၂ ရက္က် မီတာစာ႐ြက္ ၃ ႐ြက္
အေစာႀကီး လာေပးသြားတယ္ ဘာႀကီးတုန္းလို႔ ေမးေတာ့ မီတာစာ႐ြက္လာေပးတာတဲ့ေလ၊ အမ တေန႔ကမွ လာေဆာင္သြားတာဆိုေတာ့ ဒါဆိုလည္း သိမ္းထားလိုက္ဆိုဘဲ၊ အံ့ေရာ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ေတြ.. ေနာက္တလက် စာ႐ြက္ ၂ ႐ြက္ လာေပးျပန္ေရာ.. မအားတာနဲ႔ ၁ ရက္ေလးလြန္တာက် ဒဏ္ေငြ ၃၀၀၀ တဲ့ေလ မေျပာပါဘူး လႉလိုက္တယ္ဘဲ
သေဘာထားလိုက္တယ္. ခုက် လာေပးျပန္တဲ့ ၂ ႐ြက္ကို ေသခ်ာၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေႂကြးက်န္ေလး ဆိုတာေလးေတြ႕ၿပီး ေဒါသက ထြက္လာေရာ.. တခါလည္း ႏွစ္ခါလည္းမဟုတ္ စာမတတ္တာလား လူအင္အားမေလာက္တာလား ေထာင့္မေစ့တာလား ခ်က္ခ်င္းဘဲ ႐ုံးသြားၿပီး..
ဒါက ဘာေႂကြးက်န္လည္းလို႔ေမးေတာ့ အမတို႔ အရင္လက မေဆာင္တာဆိုဘဲ.. ဒီမွာၾကည့္ဆိုပီး ခ်လံျပေတာ့. ရပါတယ္ ဖ်က္ေပးပါ့မယ္တဲ့.. သူတို႔က် လြယ္လိုက္တာ ကိုေတြ ေနာက္က် ဒဏ္ေၾကးတဲ့ ၾသခ်ေလာက္ပါတယ္ အီးပီစီ ရယ္.. ဝန္ထမ္းမေလာက္ဘူးလို႔ ေျပာရေအာင္လည္း
ေန႔လည္က်သြားၾကည့္ၾကည့္ ငုတ္တုတ္ ဝိုင္ဖိုင္ ေလးနဲ႔ လက္ထဲ ဖုန္းကိုယ္စီနဲ႔ အလုပ္ေတြကိုျဖစ္လို႔ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ တိက်မွန္ကန္ နည္းစနစ္ မွန္မွန္ ျဖစ္ပါ့မလဲ ေမွ်ာ္မိေနဆဲ..
(အောက်တိုဘာလ ၂၆ ) ရက်တွင် ပြုလုပ်သော အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ ကမ္ဘောဒီယား နှင့် ထိုင်းတို့က အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို ပြစ်တင်ဝေဖန်
Photoshop ဖြင့်ပြုပြင်ထားခြင်းမရှိဘဲ ညဘက်ရောက်မှ ကြယ်များနှင့်ပြည့်နက်နေတဲ့သမုဒ္ဒရာကဲ့သို့ ထူးဆန်းလှပစွာ တောက်ပနေတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်း ( VIDEO)
ပြည့်သူရင်ခွင်ခိုလုံရင်း CDM လုပ်ချင်တဲ့ ရဲတပ်သား ၁၂ ယောက် တပ်ထဲက သွားခေါ်ပေးရင် ထွက်ပြေးလိုက်မြောက်ပုံအဆင့်ဆင့်…သဲထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်လမ်း
၁။ ရွှေဈေး ဘယ်သူ ဖွင့်တာလဲ၊ ၂။ ရွှေဆိုင်တွေ ဘာလို့ ဈေး မတူကြတာလဲ၊ ၃။ သွားဝယ်ရင်၊ သွားရောင်းရင် ဘာလို့ ကြေညာထားတဲ့ ဈေးနဲ့ မရတာလဲ။